Sheekooyinka sheekooyinka sayniska ee ugu fiican
Faallooyinka Novel Fiction Science
Jahawareer, waxaa qoray Richard Powers
Dunidu way ka baxday laxankii iyo jahawareerka (ka xumahay kaftanka). Dystopia way soo dhowdahay sababtoo ah utopia waxay had iyo jeer aad uga fogaatay ilbaxnimadayada oo kale taasoo kor u kacda tirada marka aqoonsiga guud uu hoos u dhaco. Shakhsinimadu waa u dhalasho ahaansho. ...
Wiil iyo Eygiisa Dhamaadka Adduunka, waxaa qoray CA Fletcher
Been-abuurka ka dambeeya aakhiro-doonku had iyo jeer wuxuu u muuqdaa weji laba-jibbaar ah oo suurtogal ah in la burburiyo iyo rajada dib-u-dhalashada. Xaaladdan oo kale, Fletcher wuxuu sidoo kale jiidayaa sawirrada caadiga ah ee caddeeya sida ay ku gaadhay bartaas la yaabka leh ee badbaadayaashu ay mas'uul ka yihiin dib -u -dhiska adduunkooda ...
Adduunka Ka Tag, By Rumaan Alam
U baxsashada Long Island marna kuma filna wax aan waxba ahayn. Waxaad noqon kartaa faa'iido haddii aad isku daydo inaad iska dejiso ka dib toddobaad aad u adag oo dagaal ka dhacay Magaalada New York; laakiin waa qorshe xun haddii ay tahay dhammaadka adduunka, qiyaamaha ama ...
U dhowaanshaha… Wasaaradda Mustaqbalka, Kim Stanley Robinson
Laga soo bilaabo Wasaaradda Jacaylka George Orwell ilaa Wasaaradda Waqtiga, taxanaha ugu dambeeyay ee ku guuleystay TVE. Su'aashu waxay tahay in la isku xiro wasaaradaha dhinacyo dhaadheer, mustaqbal iyo meel xun ... Waxay noqon doontaa arrin wasiiradu hormariyaan hawlo mugdi ah oo loo xilsaaray boorsooyinka maqaarkooda ... The ...
Gaajada, waxaa qoray Asa Ericsdotter
The thrillers par heer sare waa dystopias waxa noqon kara. Sababtoo ah habka dystopian -ku had iyo jeer wuxuu leeyahay qayb weyn oo cilmiga bulshada ah. Dhammaantood waxay la kulmeen amarka cusub iyada oo la isku dayay fallaagada iyo soo gudbinta cabsida. Laga soo bilaabo George Orwell ilaa Margaret Atwood qoraayaal aad u fara badan ...
Oryx iyo Crake, waxaa qoray Margaret Atwood
Dib-u-soo-saarka shaqooyinka soo jeedinta ee sheekooyinka sayniska maqnaanshaha sheekooyin cusub oo lagu quudiyo mala-awaal u dhexeeya dystopian iyo apocalyptic-ka si la jaanqaadaya waqtiyada. Kaliya Margaret Atwood ma aha qoraa khayaaliga sayniska caadiga ah. Iyadu, sawir -qaadista waxay la socotaa fikradaha in ka badan ...
The Anomaly, oo uu qoray Hervé Le Tellier
Duulistu waa dhul (ama halkii cirka) oo lagu beeray mala awaalka mala awaalka sayniska. Mid baa loo baahan yahay oo kaliya in la xusuusto khuraafaadka Saddex -xagalka Bermuda, kaas oo sida ugu dhakhsaha badan u liqay maraakiibta sida dagaalyahannada dagaalka, ama langoliers -ka Stephen King oo dhulka cunayey...
Waxay ku hafan doonaan ilmada hooyooyinkood, oo uu qoray Johannes Anyuru
Sheekooyinka sayniska mararka qaarkood sidaas ma aha. Sidoo kale waa wax xiiso leh marka laga hadlayo kheyraad, dejin ama cudurdaar fudud. Qoraaga Johannes Anyuru, wuxuu ku soo degay sheekada isagoo leh ruuxa sahaminta oo la mid ah xaaladdiisa gabayaa isku dhafan, fikradda ayaa ah in dib loo ...
Bogga1 Bogga2 ... Bogga7 Xiga →